सचिनकी जन्मदिने आमा आइ पुगिन् काठमाडौँ, तेजेन्द्रलाइ भेटेर अन्तिम निर्णय, कोसँग बसे सचिन ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 18, 2021 AdminLeaveaComment on सचिनकी जन्मदिने आमा आइ पुगिन् काठमाडौँ, तेजेन्द्रलाइ भेटेर अन्तिम निर्णय, कोसँग बसे सचिन ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
पछिल्लो समयमा के छ हजुर भनेर संसार भर चिनिएका सचिन परियारलाई जन्मदिने आमा पहिलो पटक मिडियामा आएकी छन् । सचिनको मुस्कान र बोलिको कारण उनि सबैको मनमा बस्न सफल भएका छन् । गुल्मीको एक कुनामा लुकेको आवाजलाई मिडियाको सहायतामा बाहिर निकाल्न सग्फल भएका थिए ।
सानै उमेर देखि शिल स्वभाबको कारण सचिन अहिले धेरैको मन मुटुमा बस्न सफल भएका छन् । सचिनले अहिले सम्म धेरै गीतमा स्वर दिएका छन् भने धेरै भिडियोहरुमा पनि अभिनय गरिसकेका छन् । सचिनको आमाको भनाई अनुसार मेरो छोरा यहाँ सम्म आउन पाउदा म धेरै नै खुसि भएकी छु, सधै भरि यसरी नै नाम राख्दै जाऒस, सधै सबैको यसरी नै प्यारो बन्दै जाहोस भनेकी छिन् ।
सचिनको बुवाले कान्छी श्रीमति ल्याएर आफुलाई घरबाट निकालेको आरोप पनि उनले लगाएकी छन् । तर उता बुवाले भने श्रीमतीले छाेडेर गएपछि छोराछोरीको रेखदेख गर्नका लागी सहारा चाहिने भएकाले कान्छी श्रीमति ल्याएको बताउदै आएका छन् ऊनी भन्छिन । पुरा भिडियो हेर्नुहोसः
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख ०५ गते आईतबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १८ तारिख